रक्सी पिउनुहुन्छ? रक्सी सेवन गर्दा लाग्ने रोगहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
रक्सी पिउनुहुन्छ? रक्सी सेवन गर्दा लाग्ने रोगहरु !!
(unitykhabar.com बाट सभार)
यस्ता विभिन्न समस्याको कारण निम्त्यानु भन्दा मदिरा सेवन नगर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले मदिरा सेवन गर्ने बानी त्याग्ने प्रयास गर्नुपर्छ । यदी आफैले चाहदा चाहदै पनि मदिरा सेवन गर्ने बानी नहटेमा चिकित्सकको परामर्शमा मदिराको तल हटाउन सकिन्छ । (unitykhabar.com बाट सभार)
के दुधले हाम्रो स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पुर्याउन सक्छ ?
फोक्सो बचाउनका लागि अपनाउनुस् यस्ता उपायहरु !!